Himalaya Dainik » यी १३ किसिमका केटाः जोसँग प्रेम गर्दै नगर्नुहोस्
के तपाई कसैलाई डेट गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ? कसरि तपाई आफ्नो मिस्टर पर्फेक्ट पत्ता लगाउनु हुन्छ? यहाँ १३ किसिमको केटाहरुको बारेमा प्रस्तुत गरेका छाैँ । जसको मदतले तपाई आफ्नो मिस्टर पर्फेक्टको बारेमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ।
हरेक केटि सहि केटासँग डेट गर्न चाहन्छिन । प्रेम गर्न चाहान्छिन् । हरेक केटि आफ्नो पार्टनर सहि र माया गर्ने किसिमको होस् भनेर चाहन्छिन ।
यदि तपाई सहि केटासँग डेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यी १३ कसिमका केटासँग हो-सियार हुनुहोस् । यस्ता किसिमका केटाहरुसँग डेट/प्नेम नगरेको राम्रो ।
मादक-पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्ति पनि डेट गर्नका निम्ति उपयुक्त हुदैन। किनकि हरेक समय उसले मादक-पदार्थलाइ दिने गर्दछ । किनकि उनीहरु धेरैजसो बेहोसी अवस्थामा रहने गर्दछन ।
केटीहरुले बच्चा जस्तो बानी भएको केटाहरुलाई डेट गर्नु हुदैन । उ आफ्नो उमेरमा २०/२२ बर्षको हुन् सक्ला तर उसको बानी, व्यवहार केटाकेटीको जस्तो नि हुन सक्छ | केटाकेटी जस्तो बानि देखाउनु राम्रो हो तर त्यस किसिमको व्यवहार कहिले पनि राम्रो हुदैन । जब तपाई कुनै किसिमको समस्यामा पर्नु हुन्छ तर उनिहरुबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग हुदैन ।
तपाई कोहि कसैलाई डेट गर्न खोजिरहनु भएको छ र त्यो व्यक्ति पुरुषबाधी किसिमको छ भने तपाइको सम्बन्ध कहिल्यै पनि राम्रो हुदैन ।
एकदामै धेरै फ्लर्ट गर्ने केटालाइ पनि तपाइले डेट नगर्दा राम्रो । किनकि उनीहरु कहिल्यै पनि आफ्नो रिलेसनमा सिरियस हुदैनन् ।
सधै राम्रो –
आफुलाई सबै कुरा थाहा भएको र आफु कहिल्यै पनि गलत नहुने सोच भएको केटाहरुलाई पनि डेट नगरेको राम्रो । किनकि उनीहरुले आफ्नो गल्ति कहिल्यै पनि देख्दैनन ।
पहिल्यै अरुसंग प्रेममा भएको
अरु कसै संग रिलेसनमा भएको व्यक्तिसंग पनि सम्बन्ध अगाडी बढाएको राम्रो हुदैन । किनकि अरु कसैसंग सम्बन्धमा भएको व्यक्ति तपाइको लागि उपयुक्त हुन सक्दैन ।
आफुसंग मात्र रमाउने व्यक्ति पनि तपाइको लागि उचित हुदैन । उनीहरुलाई अरु भन्दा पनि आफु संगै हराउन धेरै मन पर्छ ।
आफ्नो आमाको मात्र कुरा सुन्ने । यो अर्थमा कि आमाले भनेको केहि कुराहरु भलाई नराम्रो हुन् तर आमाले भन्नुभएको हो भनेर त्यसैलाई सत्य मान्ने केटाबाट पनि धेरै टाढा रहेको राम्रो हुन्छ ।
हरेको कुराको हिसाब–
हरेक कुराको हिसाब गर्ने केटासंग पनि सम्बन्ध नबनाएको राम्रो हुन्छ ।
कुनै पनि सम्बन्ध अगाडी बढाउन बिस्वाश सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । जो व्यक्ति आफ्नो हुने वाला सम्बन्धलाइ लिएर बिस्वाश गर्दैन । आफुलाई असुरक्षित महसुस गर्दछ भने त्यस्तो केटासंग पनि सम्बन्ध अगाडी नबढाएको राम्रो ।
सस्तो यो अर्थमा कि उसको सोचाई एकदम सस्तो छ । उसलाई माया भन्दा अन्य कुरामा धेरै नै ध्यान जान्छ भने त्यस्तो व्यक्तिसंग सम्बन्ध नबनाएको राम्रो हुन्छ ।
मिस्टर आइ लब यु
आफुले माया गर्छु भन्ने र प्रत्यक कुरामा म माया गर्छु भन्ने । तर त्यस किसिमको ब्यबहार कहिल्यै पनि नदेखाउने व्यक्तिसंग पनि टाढा रहेको राम्रो ।
केहि यस्ता पनि मनिस हुन्छन जो शिर देखि पाउ सम्म नै नक्कली पोसाक लगाएको हुन्छन । जसलाई लाग्दछ कि म अनि म मात्र राम्रो हु । अरुलाई केहि आउदैन जस्तो सोच भएको व्यक्ति बाट पनि टाढा भएको राम्रो हुन्छ । उनीहरुले तपाइलाई देखाउने ब्यबहार सधै झु-टको खेति मात्र हुने गर्दछ ।